အမှားတစ်ချက်ကြောင့် နာမည်ကြီးဘဝကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ ရင်နာစရာ Celebrity များ
အမှားတစ်ချက်ကြောင့် အောင်မြင်မှုတွေကို ကျောခိုင်းခဲ့ရတဲ့ Celebrityများ (၁)
3 Jul 2018 . 5:33 PM
Celebrity တို့ရဲ့ ဘဝဆိုတာ ပရိသတ်တွေနဲ့ Media တွေရဲ့ မျက်လုံးဒေါက်ထောက်စုံစမ်းမှုတွေ၊ အရိပ်တကြည့်ကြည့် စောင့်ကြည့်မှုတွေအောက်မှာ နေထိုင်ရှင်သန်ရတဲ့ ဘဝပါ။ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ ၂၁ရာစုကြီးမှာတော့ တစ်ချက်လေး အမှားလုပ်မိတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုပါ ထိခိုက်တဲ့အထိ သတိမူစရာတွေပိုမိုများလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနာမည်ကြီး Celebrity တွေကတော့ အမှားတစ်ချက်လုပ်မိခဲ့ရုံနဲ့တင် ကိုယ့်ရဲ့လူသိများနာမည်ကျော်တဲ့ဘဝကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အထိ ပရိသတ်တွေဒဏ်ခတ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့-
(၁) Iggy Azalea
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Fancy ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဝက်ဝက်ကွဲကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေး Iggy Azalea ကိုမှတ်မိကြသေးရဲ့လား? သူမကတော့ အရာရာကို ဘုကန့်လန့်တိုက်ရုံသာမက Nicki Minaj ၊ Azaelia Bank နဲ့ Macklemore တို့လို နာမည်ကြီးတွေနဲ့လည်း ရန်စတွေရှိတဲ့သူပါ။
ဒါ့အပြင် အဆိုးရွားဆုံးကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာပဲ စီးကရက်တွေကို Tax မကပ်ဘဲရောင်းချသူ လူမည်း Eric Garner ကို ရဲတွေကလည်ပင်းကိုဖိချုပ်ပြီးဖမ်းချိန် အသက်ရှုကြပ်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့အပေါ် လူမည်းတွေကိုဖိနှိပ်လှောင်ပြောင်ခဲ့ရာက လူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရသူပါ။
၂၀၁၅ မှာတော့ သူမဟာ လူမှုကွန်ရက်ကြီးက အရမ်းအဆိုးမြင်ပြီး မကောင်းတာတွေများလို့ ခဏစွန့်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကပါ သူမအပေါ်ချစ်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဂီတလောကမှာ Beyonce နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်အဆိုတော်မလေးတစ်ယောက်ပေါ်ခဲ့သေးတာ မှတ်မိကြမှာပါ။
Ciara ကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက သုမရဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ နာမည်အတန်အသင့်ရခဲ့သူပါ။ သူမကတော့ Queen Bey ဟာ သူမကို အတုခိုးနေတာပါလို့ ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးနောက် ဂီတလောကကနေပါ လွင့်ပါးသွားရသူပါ။
Beyonce ကို ထိပါးတဲ့သူမှန်သမျှ ကြာကြာမရပ်တည်နိုင်လောက်အောင် Queen Bey အရှိန်အဝါကြီးပုံကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။
(၃) Mark Salling
Glee ရုပ်သံကြယ်ပွင့်ဟောင်း Mark Salling ကတော့ အနုပညာလောကထဲ ပြန်လာဖို့ ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
အကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့နေအိမ်အခန်းထဲက USB Flash Drive နဲ့ Hard Drive တွေထဲမှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးတွေရဲ့ ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီး စုဆောင်းထားတာကို ရဲတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ သူဆက်လက်ရိုက်ကူးမယ့် Mini-Series တွေပါ ရိုက်ကူးဖို့ ဖျက်ခံခဲ့ရပြီး ကျောင်းတွေ၊ ပန်းခြံတွေ၊ ကစားကွင်းတွေ၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပေ ၁၀၀ အကွာမှာနေဖို့ အမိန့်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ လူထုကြားထဲမှာပါ မျက်နှာမပြရဲတော့ဘဲ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမှာ ကြိုးဆွဲချပြီး အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
သူကတော့ အနုပညာသည်ဘဝကိုသာမက အသက်ကိုပါ အဆုံးရှုံးခံသွားခဲ့သူပါပဲ။
၉၀ ပြည့်နှစ်တွေက R&B နဲ့ Pop Music ဂီတသီချင်းတွေကြောင့် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Brandy ဟာ သူ့ခေတ်သူ့အခါက လူကြိုက်များခဲ့သူပါ။
သူမရဲ့ သီချင်းတွေက Hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် America’s Got Talent 2006 မှာတောင် ဒိုင်လူကြီးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ရသူပါ။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ဘဝရော ဂီတလမ်းကြောင်းကိုပါ ဇောက်ထိုးဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဟိုင်းဝေးလမ်းမပေါ်မှာ ဖြည်းဖြည်းအေးဆေးသွားနေတဲ့ ကား၂စီးလုံးကို သူမရဲ့အရှိန်ပြင်းပြင်းသွားနေတဲ့ကားက ဝင်တိုက်ခဲ့မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကားတိုက်မှုကြောင့် ကားတစ်စီးထဲက ကလေးမိခင်တစ်ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး Brandy လည်း နာမည်ရော၊ အောင်မြင်မှုတွေပါကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ မှာ သူမရဲ့ Album တစ်ခွေထွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လုံးဝအရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲ့နောက်မှာ သူမလည်း ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်က ပျောက်သွားခဲ့ရတော့တာပါပဲ။
(၅) Ashlee Simpson
Ashlee Simpson ကတော့ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားကြိုးစား အမဖြစ်သူ Jessica Simpsom ရဲ့အောင်မြင်မှုကို လိုက်မမီခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အနုပညာလောကကနေ စုန်းစုန်းမြုပ်ပျောက်သွားစေတဲ့အကြောင်းကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက Saturaday Night Live မှာ သူမရဲ့ Single Album သီချင်း “Pieces of Me” ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာ သီချင်းဆိုပြီးသွားလို့ နောက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပြောင်းချိန် “Pieces of Me” သီချင်းက နောက်ခံသူမရဲ့အသံနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့အချိန် ပရိသတ်တွေအားလုံး Lip Sync လို့ခေါ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းဖျားလှုပ်ရုံဟန်ဆောင်သီဆိုခဲ့တဲ့ သူမကို ရှုံ့ချခဲ့ပြီး အဲ့နောက်တော့ သူမရဲ့ Celebrity ဘဝလည်း ပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပါပဲ။
Celebrity တွေရဲ့ အမှားတစ်ချက်ကြောင့် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျ ဘဝပျက်မှုတွေကတော့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေကြောင့် အနုပညာလောကက စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ Celebrity ၁၀ ဦးထဲက ပထမ ၅ဦးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အပိုင်း (၂) ကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါဦးမယ်။
အမှားတဈခကျြကွောငျ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ကြောခိုငျးခဲ့ရတဲ့ Celebrityမြား (၁)
Celebrity တို့ရဲ့ ဘဝဆိုတာ ပရိသတျတှနေဲ့ Media တှရေဲ့ မကျြလုံးဒေါကျထောကျစုံစမျးမှုတှေ၊ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ စောငျ့ကွညျ့မှုတှအေောကျမှာ နထေိုငျရှငျသနျရတဲ့ ဘဝပါ။ နညျးပညာတှတေိုးတကျလာတဲ့ ၂၁ရာစုကွီးမှာတော့ တဈခကျြလေး အမှားလုပျမိတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးကိုပါ ထိခိုကျတဲ့အထိ သတိမူစရာတှပေိုမိုမြားလာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီနာမညျကွီး Celebrity တှကေတော့ အမှားတဈခကျြလုပျမိခဲ့ရုံနဲ့တငျ ကိုယျ့ရဲ့လူသိမြားနာမညျကြျောတဲ့ဘဝကို စှနျ့လှတျလိုကျရတဲ့အထိ ပရိသတျတှဒေဏျခတျတာကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ သူတို့တှကေတော့-
၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ Fancy ဆိုတဲ့ သီခငျြးနဲ့ ဝကျဝကျကှဲကမ်ဘာကြျောခဲ့တဲ့ အဆိုတျောမလေး Iggy Azalea ကိုမှတျမိကွသေးရဲ့လား? သူမကတော့ အရာရာကို ဘုကနျ့လနျ့တိုကျရုံသာမက Nicki Minaj ၊ Azaelia Bank နဲ့ Macklemore တို့လို နာမညျကွီးတှနေဲ့လညျး ရနျစတှရှေိတဲ့သူပါ။
ဒါ့အပွငျ အဆိုးရှားဆုံးကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာပဲ စီးကရကျတှကေို Tax မကပျဘဲရောငျးခသြူ လူမညျး Eric Garner ကို ရဲတှကေလညျပငျးကိုဖိခြုပျပွီးဖမျးခြိနျ အသကျရှုကွပျပွီး သဆေုံးသှားတဲ့အပျေါ လူမညျးတှကေိုဖိနှိပျလှောငျပွောငျခဲ့ရာက လူတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှခေံခဲ့ရသူပါ။
၂၀၁၅ မှာတော့ သူမဟာ လူမှုကှနျရကျကွီးက အရမျးအဆိုးမွငျပွီး မကောငျးတာတှမြေားလို့ ခဏစှနျ့ခှာတော့မယျလို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေပါ သူမအပျေါခဈြခွငျးကို စှနျ့လှတျခဲ့ပါတော့တယျ။
ဂီတလောကမှာ Beyonce နဲ့ခပျဆငျဆငျအဆိုတျောမလေးတဈယောကျပျေါခဲ့သေးတာ မှတျမိကွမှာပါ။
Ciara ကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှဈတုနျးက သုမရဲ့ သီခငျြးလေးတှနေဲ့ နာမညျအတနျအသငျ့ရခဲ့သူပါ။ သူမကတော့ Queen Bey ဟာ သူမကို အတုခိုးနတောပါလို့ ထုတျဖျောပွောခဲ့ပွီးနောကျ ဂီတလောကကနပေါ လှငျ့ပါးသှားရသူပါ။
Beyonce ကို ထိပါးတဲ့သူမှနျသမြှ ကွာကွာမရပျတညျနိုငျလောကျအောငျ Queen Bey အရှိနျအဝါကွီးပုံကတော့ အံ့မခနျးပါပဲ။
Glee ရုပျသံကွယျပှငျ့ဟောငျး Mark Salling ကတော့ အနုပညာလောကထဲ ပွနျလာဖို့ ဘယျတော့မှမဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
အကွောငျးကတော့ သူ့ရဲ့နအေိမျအခနျးထဲက USB Flash Drive နဲ့ Hard Drive တှထေဲမှာ အသကျမပွညျ့သေးတဲ့မိနျးကလေးငယျငယျလေးတှရေဲ့ ညဈညမျးဓါတျပုံတှေ ထောငျနဲ့ခြီပွီး စုဆောငျးထားတာကို ရဲတှရှောဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပွီး ဖမျးဆီးခံခဲ့ရလို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့နောကျမှာတော့ သူဆကျလကျရိုကျကူးမယျ့ Mini-Series တှပေါ ရိုကျကူးဖို့ ဖကျြခံခဲ့ရပွီး ကြောငျးတှေ၊ ပနျးခွံတှေ၊ ကစားကှငျးတှေ၊ မိနျးကလေးတှနေဲ့ ပေ ၁၀၀ အကှာမှာနဖေို့ အမိနျ့ခခြံခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ လူထုကွားထဲမှာပါ မကျြနှာမပွရဲတော့ဘဲ နောကျဆုံးမှာတော့ ၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီလမှာ ကွိုးဆှဲခပြွီး အဆုံးစီရငျသှားခဲ့ပါတော့တယျ။
သူကတော့ အနုပညာသညျဘဝကိုသာမက အသကျကိုပါ အဆုံးရှုံးခံသှားခဲ့သူပါပဲ။
၉၀ ပွညျ့နှဈတှကေ R&B နဲ့ Pop Music ဂီတသီခငျြးတှကွေောငျ့ ကြျောကွားခဲ့တဲ့ Brandy ဟာ သူ့ခတျေသူ့အခါက လူကွိုကျမြားခဲ့သူပါ။
သူမရဲ့ သီခငျြးတှကေ Hit ဖွဈခဲ့တဲ့အပွငျ America’s Got Talent 2006 မှာတောငျ ဒိုငျလူကွီးအဖွဈပါဝငျခဲ့ရသူပါ။ ဒါပမေယျ့ သူမရဲ့ဘဝရော ဂီတလမျးကွောငျးကိုပါ ဇောကျထိုးဖွဈစခေဲ့တာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှဈ ဟိုငျးဝေးလမျးမပျေါမှာ ဖွညျးဖွညျးအေးဆေးသှားနတေဲ့ ကား၂စီးလုံးကို သူမရဲ့အရှိနျပွငျးပွငျးသှားနတေဲ့ကားက ဝငျတိုကျခဲ့မှုပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီကားတိုကျမှုကွောငျ့ ကားတဈစီးထဲက ကလေးမိခငျတဈယောကျ သဆေုံးခဲ့ပွီး Brandy လညျး နာမညျရော၊ အောငျမွငျမှုတှပေါကဆြငျးခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၄ မှာ သူမရဲ့ Album တဈခှထှေကျခဲ့ပမေယျ့လညျး လုံးဝအရှုံးပျေါခဲ့ပါတော့တယျ။
အဲ့နောကျမှာ သူမလညျး ဂီတလမျးကွောငျးပျေါက ပြောကျသှားခဲ့ရတော့တာပါပဲ။
Ashlee Simpson ကတော့ ဘယျလိုပဲ ကွိုးစားကွိုးစား အမဖွဈသူ Jessica Simpsom ရဲ့အောငျမွငျမှုကို လိုကျမမီခဲ့ပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ အနုပညာလောကကနေ စုနျးစုနျးမွုပျပြောကျသှားစတေဲ့အကွောငျးကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှဈတုနျးက Saturaday Night Live မှာ သူမရဲ့ Single Album သီခငျြး “Pieces of Me” ကိုဆိုတဲ့နရောမှာ သီခငျြးဆိုပွီးသှားလို့ နောကျသီခငျြးတဈပုဒျပွောငျးခြိနျ “Pieces of Me” သီခငျြးက နောကျခံသူမရဲ့အသံနဲ့ထှကျပျေါလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့အခြိနျ ပရိသတျတှအေားလုံး Lip Sync လို့ချေါတဲ့ နှုတျခမျးဖြားလှုပျရုံဟနျဆောငျသီဆိုခဲ့တဲ့ သူမကို ရှုံ့ခခြဲ့ပွီး အဲ့နောကျတော့ သူမရဲ့ Celebrity ဘဝလညျး ပြောကျကှယျသှားတော့တာပါပဲ။
Celebrity တှရေဲ့ အမှားတဈခကျြကွောငျ့ ကံဆိုးမိုးမှောငျကြ ဘဝပကျြမှုတှကေတော့အမြိုးမြိုးအဖုံဖုံ ဆိုးရှားလှနျးလှပါတယျ။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့မှားယှငျးတဲ့အပွုအမူ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့ အနုပညာလောကက စှနျ့ခှာခဲ့ရတဲ့ Celebrity ၁၀ ဦးထဲက ပထမ ၅ဦးပဲ ရှိပါသေးတယျ။ အပိုငျး (၂) ကို ဆကျလကျဖျောပွသှားပါဦးမယျ။